के तपाईलाई थाहा छ, पानी कति र कसरी पिउने ? - नेपालबहस
के तपाईलाई थाहा छ, पानी कति र कसरी पिउने ?
| १५:०७:३७ मा प्रकाशित
२७ फागुन, काठमाडौं । शरीरलाई खानाजस्तै पानी पनि आवश्यक छ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न पानी पिउने समय र तरिकाबारे थाहा पाउनु जरुरी छ । शरीरमा आवश्यक पानी भएन भने विभिन्न रोगको जोखिम बढ्न सक्छ । हामीले खाएको पोषक तत्व रगतमा पुर्याउन र शरीरको विजातिय तत्व बाहिर निकाल्न पानीको भुमिका रहन्छ । शरीरको ७६ प्रतिशत भाग पानीले बनेको हुन्छ ।
पानीमा तरलता, स्वच्छता, हलुकापन, शीतलपनजस्ता गुणहरू हुन्छन् । पानीको कमीले शरीरभित्र मात्र होइन, शरीरबाहिर छालामा पनि नकारात्मक असर देखा पर्न सक्छन् । पानी कति र कसरी पिउने ? सधैं प्रयोगमा ल्याइरहने कुरा भए पनि यो जटिल विषय हो । तर यसविषयमा विषेशज्ञहरूबीच नै एक मत छैन । वास्तवमा हाम्रो शरीरमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्री बस्ने क्षेत्र, मौसम र शारीरिक बनोटको आधारमा पनि फरक हुने गर्छ ।
यदि गम्भिर रोगहरुबाट बच्न चाहनुहुन्छ ? आजैदेखि निम पानी पिउनुस ३ हप्ता पहिले
पानीको अभाव झेलेको बागलुङ बजारमा अब बोरिङ गरिदै २ महिना पहिले
काठमाडौंमा तपाईलाई प्यास लाग्यो भने कसरी पानी पिउनुहुन्छ ? २ महिना पहिले
ऐन उल्लङ्घन गर्नेमा पानी उद्योग पहिलो नम्बरमा ४ महिना पहिले
सरकारको अनुदानमा डिप बोरिङमार्फत घरघरमा पानी, स्थानीवासी खुसी ५ महिना पहिले
चन्द्रमाको अँध्यारो तथा चिसो क्षेत्रमा बरफ पाइएको नासाको दाबी ६ महिना पहिले
ओली र ठाकुरबीच भेटवार्ता ४४ मिनेट पहिले
ओली सरकारको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको संरक्षण ५६ मिनेट पहिले
आठौँ पटक जिब्रो छेडाए बुद्धकृष्ण श्रेष्ठले ४ घण्टा पहिले
कांग्रेस र कम्युनिष्टको वैकल्पिक धार निर्माण गर्नु नै सुर्यबहादुर प्रती सच्चा श्रद्धाञ्जली : राप्रपा अध्यक्ष थापा ८ घण्टा पहिले
सुदूरमा ‘म हिँड्छु, मेरो प्रदेश हिँड्छ’ अभियान ४ घण्टा पहिले
इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महान पर्व रमजान भोलिदेखि शुरु २ दिन पहिले
सात वटा उपसुचक घटेको दिन नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा २ दिन पहिले
सतर्कता नअपनाए मुलुक पुन: लकडाउन ! ४ दिन पहिले
कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल: वरिष्ठ नेता पौडेल ५ दिन पहिले
पाठेघर र स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित रोगको परीक्षण ४ दिन पहिले
आज पूर्वी नाका ७२ घण्टाका लागि शिल १० घण्टा पहिले
लक्ष्मी बैंकले ‘विश्व वित्तीय सप्ताह २०२१’ मनायो, सातै प्रदेशमा विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता क्लास २ हप्ता पहिले
जापानद्वारा उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध अरु दुई वर्ष थप १ हप्ता पहिले
किसान लघुवित्तकाे शेयर कारोबार रोक्का, नेप्सेले माग्यो स्पष्टिकरण ३ हप्ता पहिले
फ्रान्समा एकैदिनमा झण्डै ४२ हजार संक्रमित ३ हप्ता पहिले
दक्षिणकाली मन्दिर परिसरमा सनराइज बैंकको क्यूआर कोड संचालन ३ हप्ता पहिले
दुर्घटनामा एकको मुत्यु, तीन गम्भीर घाइते ८ महिना पहिले
रोटेपिङ संरक्षण गर्दै व्यास नगरपालिका २ वर्ष पहिले
महिला सहयात्रा लघुवित्तको सभाले १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न दियो स्वीकृत २ हप्ता पहिले
कांग्रेस अनुशासन समितिमा एक हजार दुई सय उजुरी ! २ वर्ष पहिले